Honeywell WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ - လက်စွဲစာအုပ် +
Honeywell WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ
Posted by ကိုfazlul ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2020 မတ်လ 29, 2021
1 မှတ်ချက် Honeywell WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲကိုဖတ်ရှုပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » Honeywell » Honeywell WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ
1 installation လက်စွဲစာအုပ်
2 box ထဲမှာသင်တွေ့လိမ့်မည်
4 သင်၏ Wi-Fi အပူထိန်းကိရိယာ၏ထူးခြားချက်များ
Honeywell ဝိုင်ဖိုင် Touchscreen ပရိုဂရမ်မာအပူထိန်းကိရိယာ
အခြား Honeywell Pro အပူထိန်းကိရိယာလက်စွဲများ -
T4 Pro ကို
T6 Pro ကို
RTH5160 non-programmable အပူထိန်းကိရိယာ
WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ
ဝိုင်ဖိုင်အရောင် Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာ
VisionPRO WiFi အပူထိန်းကိရိယာ
အပူထိန်းကိရိယာ ID ကဒ်
သင်၏ Honeywell ဝိုင်ဖိုင် touchscreen ပရိုဂရမ်မာအပူထိန်းကိရိယာကိုဝယ်ယူခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါသည်။ Honeywell ၏ Total Connect Comfort Solutions တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးပါကသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိအပူနှင့်အအေးစနစ်အားအဝေးမှစောင့်ကြည့်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်သွားသည့်နေရာတိုင်း၌သင်သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်စနစ်နှင့်ဆက်နေနိုင်သည်။
သင်သည်မကြာခဏခရီးသွားခြင်း၊ အားလပ်ရက်အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါက Honeywell ၏ Total Connect Comfort သည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သတိ: ဤအပူထိန်းကိရိယာသည် 24 ဗို့စနစ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သူက 120/240 volt systems မှာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သတိ: ဤအပူထိန်းကိရိယာတွင် Lithium battery ပါဝင်ပြီး Perchlorate ပစ္စည်းပါဝင်နိုင်သည်။
Perchlorate ပစ္စည်း - အထူးကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။
ကရုဏာသတိပေးချက် - သင့်ရဲ့အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းကိုအမှိုက်ပုံးထဲမထည့်ပါနဲ့။ သင်၏အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းကိုမည်သို့နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သို့အန္တရာယ်ကင်းစွာဖယ်ရှားရမည်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို www.thermostat-recycle.org သို့မဟုတ် 1-800-238-8192 ရှိ Thermostat Recycling Corporation သို့ဆက်သွယ်ပါ။
အသိပေးစာ: အကယ်၍ ပြင်ပအပူချိန် 50 ° F (10 ° C) အောက်သို့ကျဆင်းပါကဖြစ်နိုင်သည့်ဖိအားကြောင့်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်၊ လေအေးပေးစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
wifithermostat.com သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုပါသို့မဟုတ်သိုလှောင်ရုံသို့အပူထိန်းကိရိယာမပြန်မီအကူအညီအတွက် 1-855-733-5465 ကိုခေါ်ပါ။
သင်၏ Wi-Fi အပူထိန်းကိရိယာ၏ထူးခြားချက်များ
သင်၏အပူ / အအေးပေးစနစ်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်အင်တာနက်ကိုဆက်သွယ်ပါ
သင်၏အပူ / အအေးပေးသည့်စနစ်ဆက်တင်များကိုကြည့်ရှုပြောင်းလဲပါ
အပူ / အေးမြအော်တို changeover
သင်၏ Wi-Fi အပူထိန်းကိရိယာကိုတပ်ဆင်ပြီးပါက၎င်းသည်အိမ်မျက်နှာပြင်ကိုပြလိမ့်မည်။ သင်ကြည့်နေသည့်ပုံပေါ် မူတည်၍ ဤမြင်ကွင်း၏အစိတ်အပိုင်းများသည်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းရန်သင့်လက်ချောင်းဖြင့်သင့်တော်သောareaရိယာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်နှိပ်ပါ။
ဤအပူထိန်းကိရိယာကိုစွမ်းအင်ချွေတာသောပရိုဂရမ်ဆက်တင်များနှင့်အချိန်လေးကြိမ်အတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပုံသေသတ်မှတ်ထားသော settings ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အပူ / အအေးကုန်ကျစရိတ်ကိုညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုပါက ၃၃% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ ချွေတာသုံးစွဲမှုသည်ပထ ၀ ီနယ်မြေနှင့်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
သင်၏ Wi-Fi ပရိုဂရမ်မာ touchscreen အပူထိန်းကိရိယာကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးချက်ချင်းသွင်းယူပြီးမှတ်ပုံတင်သည်နှင့်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ဝေးလံခေါင်ဖျား access များအတွက်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်။
မင်းမစတင်မီ သငျသညျအတိုတပ်ဆင်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်ပေမည်။ ဤလမ်းညွှန်၏ရှေ့ဖက်ရှိ QR Code®ကိုသုံးပါ၊ သို့မဟုတ် wifithermostat.com သို့သွားပါ။
အမှတ်2Phillips ကဝက်အူလှည့
အဆင့် (optional ကို)
Drill and bits (drywall အတွက် 3/16”၊ အင်္ဂတေအတွက် 7/32”) (optional)
တူ (optional ကို)
သင်၏စက်ကိရိယာများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အနိုင်အထက်သေတ္တာ (သို့မဟုတ်) system switch ရှိသင်၏အပူ / အအေးစနစ်သို့ပါဝါကို OFF ပါ။
placeplate နှင့် wiring ကိုထားခဲ့စဉ် thermostat အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်ရည်ညွှန်းရန်သင်၏အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းပေါ်တွင်ဝါယာကြိုးများ၏ပုံကိုရိုက်ပါ။
သင့်တွင်တံဆိပ်ခတ်ထားသောမာကျူရီပြွန်ပါရှိသည့်အပူထိန်းအပူထိန်းကိရိယာတစ်ခုရှိပါကသင့်လျော်သောစွန့်ပစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များစာမျက်နှာ ၂ ကိုဖွင့်ပါ။
သင်ကဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ဝါယာကြိုးတစ်ခုစီကိုတံဆိပ်ကပ်ဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့စေးကပ်တဲ့ tags တွေကိုသုံးပါ။ ဝါယာကြိုးအရောင်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲအပူထိန်းကိရိယာ terminal terminal အဟောင်းများအရဝါယာကြိုးများကိုတံဆိပ်ကပ်ပါ။
မှတ်စု: အကယ်၍ အဘယ်သူမျှမကဝါယာကြိုး terminal ကိုတံဆိပ်ကိုက်ညီလျှင်, အလွတ် tag ကိုပေါ်တွင် terminal ကိုတံဆိပ်ရေးပါ။
အားလုံးဝါယာကြိုးတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အဆက်ပြတ်ပြီးနောက်အားလုံးသောမြို့ရိုးမှ wallplate ဖယ်ရှားပါ။
Wi-Fi အပူထိန်းကိရိယာနှင့်၎င်း၏ wallplate သီးခြား။
သင်၏အသစ်သောအပူထိန်းကိရိယာအသစ်တွင်၊ လက်ပံပြား၏ထိပ်နှင့်အောက်ပိုင်းကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ထားပြီးလက်ကိုအပူထိန်းကိရိယာ (ရှေ့) ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ အပိုင်းပိုင်းဆွဲထုတ်။
Wi-Fi အပူထိန်းကိရိယာအတွက် wallplate ကိုတပ်ပါ။
အပူထိန်းကိရိယာနှင့်အတူပါ ၀ င်သောဝက်အူများနှင့်ကျောက်ဆူးများဖြင့်သင်၏ wallplate အသစ်ကိုတပ်ဆင်ပါ။
drywall များအတွက် 3/16-in တွင်းတူး။
အင်္ဂတေအတွက် 7/32-in တွင်းတူး။
မှတ်စု: Wi-Fi အပူထိန်းကိရိယာတွင်အလုပ်လုပ်ရန် C ဝါယာကြိုးတစ်ခုလိုအပ်သည်။ C သို့မဟုတ်ဘုံသုံးဝါယာကြိုးသည် ၂၄ VAC ပါဝါကိုအပူထိန်းကိရိယာသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ များသောအားဖြင့်စက်မှုနှင့်ဘက်ထရီအသုံးပြုသည့်အပူထိန်းကိရိယာများသည် C ဝါယာကြိုးမလိုအပ်ပါ။ သင့်မှာ C ဝါယာကြိုးမရှိဘူးဆိုရင်၊
နံရံသို့တွန်းပို့သည့်အသုံးမပြုသည့်ဝါယာကြိုးကိုရှာဖွေခြင်း။ ထိုဝါယာကြိုးကို C နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏အပူ / အအေးစနစ်တွင် 24 VAC ဘုံနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ wifithermostat.com မှာဗွီဒီယိုအပိုင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
ဝါယာကြိုးအသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်း။ လိုအပ်ပါကဝါယာကြိုးအသစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်ကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ (wifithermostat.com သို့သွားပါ။ သင့်ဒေသရှိကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်ကိုရှာပါ။ )
ဘို့ သမားရိုးကျ အပူ / အအေးစနစ်များ (သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မီးဖို၊ လေအေးပေးစက်)၊ စာမျက်နှာ ၁၆ တွင်ထပ်မံအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက်စာမျက်နှာ ၆၅ ရှိ“ ဝေါဟာရ” ကိုကြည့်ပါ။
တစ်ဘို့ အပူစုပ်စက် ထပ်မံအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက်စာမျက်နှာ ၆၅ ရှိ“ ဝေါဟာရ” ကိုကြည့်ပါ။
7A ။ ဝါယာကြိုးများချိတ်ဆက်ပါ။
သင်၏သမားရိုးကျ system.a သို့ ၀ ိုင်ဖိုင်အပူထိန်းကိရိယာကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဝါယာကြိုးများရှိတံဆိပ်များကို terminal တံဆိပ်များနှင့်လိုက်ဖက်ပါ။ သင့်မှာ C ကြိုးရှိရမယ်။ စာမျက်နှာ 15 ကိုကြည့်ပါ။
ခ။ ဝက်အူများကိုလျှော့ချပါ၊ ဝါယာကြိုးများကိုဆိပ်ကမ်းအတွင်းရှိအစွန်းရှိအပေါက်များထဲသို့ထည့်ပါ။
။ စာမျက်နှာ 22 ကိုဆက်သွားပါ။
7B ။ ဝါယာကြိုးများချိတ်ဆက်ပါ။
သင့်ရဲ့အပူစုပ်စက်သို့ Wi-Fi ကိုအပူထိန်းကိရိယာမှဝါယာကြိုး။
a. ဝါယာကြိုးများရှိတံဆိပ်များကိုအပူထိန်းကိရိယာအသစ်ပေါ်ရှိ terminal တံဆိပ်များနှင့်ကိုက်ညီပါ။ သင့်မှာ C ကြိုးရှိရမယ်။ စာမျက်နှာ 15 ကိုကြည့်ပါ။
b. ဝက်အူများကိုလျှော့ချပါ၊ ဝါယာကြိုးများကိုဆိပ်ကမ်းအတွင်းရှိအစွန်းရှိအပေါက်များထဲသို့ထည့်ပါ။
c. အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းတွင် AUX နှင့် E တို့တွင်သီးခြားဝါယာကြိုးများရှိပါက၎င်းနှစ်ခုစလုံးကိုဝါယာကြိုးထဲသို့ထည့်ပါ
E / AUX terminal ကို အကယ်၍ အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းတွင် AUX တွင် E သို့ Jumper ပါ ၀ င်ပါက E / AUX terminal တွင်ဝါယာကြိုးကိုထည့်ပါ။ Jumper မလိုအပ်ပါ။
e. စာမျက်နှာ 22 ကိုဆက်သွားပါ။
သင်၏ဝါယာကြိုးတံဆိပ်များသည် terminal တံဆိပ်များနှင့်မကိုက်ညီပါကဤအရာကိုသုံးပါ။
မှတ်စု: သင့်တွင် C ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်သူနှင့်တူရမည်။ စာမျက်နှာ 15 ကိုကြည့်ပါ။
Alternative Wiring key (အပူစုပ်စက်စနစ်သာ)
1. R နှင့် RC ဆိပ်ကမ်းများကြားတွင်သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုထားပါ။
2. သင်၏အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းတွင် V နှင့် VR ဝါယာကြိုးနှစ်မျိုးလုံးရှိပါက wifithermostat.com ကိုအကူအညီတောင်းပါ။
3. အကယ်၍ သင်၏အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းတွင်သီးခြား O နှင့် B ဝါယာကြိုးများရှိပါက B terminal ကို C terminal သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ အကယ်၍ အခြားဝိုင်ယာကြိုးသည် C terminal နှင့်ချိတ်ဆက်ပါကအကူအညီအတွက် wifithermostat.com ကိုစစ်ဆေးပါ။ O / B terminal သို့ O wire ကိုချိတ်တွဲပါ။ 0190 င် System Function0ကိုသတ်မှတ်ပါ (စာမျက်နှာ ၅၅ တွင်ကြည့်ပါ) ။
4. သင်၏အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းတွင်အိုဝါယာကြိုးတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ B ဝါယာကြိုးရှိပါကအိုဝါယာကြိုးကို O / B terminal တွင်ကပ်ပါ။
5. သင်၏အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းတွင်သီးခြား Y1, W1 နှင့် W2 ဝါယာများရှိပါက wifithermostat.com ကိုအကူအညီတောင်းပါ။
6. ဒါက system monitor ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ မော်နီတာမှပြfindsနာရှိလျှင်အပူထိန်းကိရိယာ၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့် (အဖုံးမှတဆင့်ထွန်းလင်းတောက်ပသော) အနီရောင်အလင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
7. အကယ်၍ အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းတွင် AUX နှင့် E တို့တွင်သီးခြားဝါယာကြိုးများရှိပါက၎င်းနှစ်မျိုးလုံးကို E / AUX terminal ထဲသို့ထည့်ပါ။ အကယ်၍ အပူထိန်းကိရိယာအဟောင်းတွင် AUX တွင် E သို့ Jumper ပါ ၀ င်ပါက E / AUX terminal တွင်ဝါယာကြိုးကိုထည့်ပါ။ Jumper မလိုအပ်ပါ။
K terminal ကိုမသုံးပါနှင့်။
အပူထိန်းကိရိယာကို wallplate နှင့်တည့်တည့်ထားပါ၊ ထို့နောက်နေရာသို့ပြန်သွားပါ။
အပူ / အအေးပေးစနစ်ကိုဖွင့်ပါ
breaker box (သို့) system switch တွင်သင်၏အပူ / အအေးပေးစနစ်အတွက်ပါဝါကိုပြန်ဖွင့်ပါ။
ပြသသည့်အချိန်နှင့်နေ့စွဲကိုပြောင်းလဲရန် s သို့မဟုတ် t ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။
setting တစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲရန်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။
သင့်ရဲ့အပူ / အအေးစနစ်အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ပါ။အကယ်၍ သင်၏ system type သည်သမားရိုးကျအဆင့်တစ်ခုသာဖြစ်ပါကစာမျက်နှာ ၂၇ ရှိ“ သင်၏ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း” ကိုဆက်လုပ်ပါ။
• Backup အပူမရှိဘဲအပူစုပ်စက်
• Backup အပူနှင့်အတူအပူစုပ်စက်
သင်၏အပူထိန်းကိရိယာကိုသင့်စနစ်အမျိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီရန်စာမျက်နှာ ၅၁ တွင်ကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်စာမျက်နှာ ၂၇ ရှိ“ သင်၏ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ” ကိုဆက်လုပ်ပါ။
သင်၏အပူ / အအေးစနစ်အမျိုးအစားကိုသင်မသေချာပါကသို့မဟုတ်အခြားမေးခွန်းများရှိပါက wifithermostat.com သို့သွားပါ
သင်သည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်မှီဝဲပါက wallplate မှအပူထိန်းကိရိယာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်အပူထိန်းကိရိယာကိုပြန်လည်စတင်ပါ၊ ၅ စက္ကန့်စောင့်ပြီးနောက်၎င်းကို wallplate သို့ပြန်ယူပါ။ လာမယ့်စာမျက်နှာမှာစတင်တဲ့ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာအဆင့် ၁ ကိုပြန်သွားပါ။
Honeywell WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာ - Programming လက်စွဲ
Honeywell WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာလက်စွဲ - အကောင်းဆုံး PDF
Honeywell WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာလက်စွဲ - မူရင်း PDF
သင်၏လက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ? မှတ်ချက်များအတွက် post!
Honeywell ဝိုင်အရောင် Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များ တပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များ Honeywell ဝိုင်ဖိုင်အရောင် Touchscreen Programmable Thermostat Model: RTH9580 ...
Honeywell WiFi Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာအစီအစဉ်လက်စွဲ Programming လက်စွဲ Honeywell ဝိုင်ဖိုင် Touchscreen ပရိုဂရမ်မာအပူထိန်းကိရိယာပုံစံ: RTH8580WF အခြား ...
Honeywell ဝိုင်အရောင် Touchscreen အပူထိန်းကိရိယာပရိုဂရမ်အသုံးပြုသူလက်စွဲ Programming အသုံးပြုသူလက်စွဲ Wi-Fi အရောင် Touchscreen Programmable Thermostat Honeywell RTH9580 ...
Honeywell ဝိုင်အပူထိန်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ တပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ Honeywell WiFi အပူထိန်းကိရိယာမော်ဒယ်လ်: RTH65801006 & RTH6500WF စမတ် ...
Honeywell VisionPRO WiFi အပူထိန်းကိရိယာအသုံးပြုသူလက်စွဲ အသုံးပြုသူလက်စွဲ WiFi အပူထိန်းကိရိယာ Honeywell VisionPRO အခြား Honeywell Pro အပူထိန်းကိရိယာ ...
Honeywell ဝိုင်အပူထိန်းကိရိယာပရိုဂရမ်အသုံးပြုသူလက်စွဲ Programming အသုံးပြုသူလက်စွဲ Honeywell WiFi အပူထိန်းကိရိယာပုံစံ: RTH65801006 & RTH6500WF ...
Posted by ကိုfazlul ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2020 မတ်လ 29, 2021 Posted in,HoneywellTags: Honeywell, programming ကို, အပူထိန်းကိရိယာ, ထိတွေ့မျက်နှာပြင်, ဝိုင်ဖိုင်
ယခင် Post မှ Previous post:
GE GUD27ESSM / 27GSSM စနစ်ကျသော Spacemaker သံမဏိအ ၀ တ်လျှော်စက်နှင့်ခြောက်စက်
Electric Cooktop တပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်လက်စွဲစာအုပ်
မတ်လ 1, 2021 မှာ 12: 35 နံနက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူနှင့်အအေးလေအေးစက်အတွက် HoneyWell လေအေးပေးစက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီလေအေးပေးစက်ဟာဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Wifi ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူး၊ အိုင်ဖုန်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုချိန်ညှိနိုင်တဲ့ Wifi ဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းချင်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုမျိုးနဲ့သင့်လျော်ပြီးဝါယာကြိုးတပ်ဆင်မလဲ။
ဤ HoneyWell ကိုသင်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း HoneyWell မှလေ့လာနိုင်သည်။ ဤသည်ကို Wi-Fi, ဤကဲ့သို့သောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကို Wi-Fi, ဤကဲ့သို့သော iPhone များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများအနက် Wifi, ဤကဲ့သို့သော iPhone နှင့်အတူဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များ။ ဒီနည်းကိုလူအများကမုန်းတီးနေပြီလား? ùđặ?? c vààđặvđặđặ ayayay choay ayayayayayay ayayayayay ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
NETGEAR ကြိုးမဲ့ AirBridge တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
JBL ကလပ် 422 ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ
behringer SYSTEM 100 172 PHASE SHIFTER / DELAY / LFO အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
ဒြပ်စင် E4AA43R အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
G. on Honeywell Pro စီးရီးအပူထိန်းကိရိယာလက်စွဲစာအုပ်
Andrea on Redmi AirDots ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲ
aliff syakir on SoundPeats Sonic လက်စွဲစာအုပ်
Hamilton က on Google Home Mini လက်စွဲ
ဒန်ဒေးဗစ် on Maytag Top Loading အဝတ်လျှော်စက်အသုံးပြုသူလက်စွဲ
လက်စွဲ +, စော်ကားသော WordPress ကိုစွမ်းအားဖြင့်။